निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीका हरेक कर्तुत् प्रमाण मेटाउने को हुन् ती पोख्त व्यक्ति? – PathivaraOnline
Home > समाज > निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीका हरेक कर्तुत् प्रमाण मेटाउने को हुन् ती पोख्त व्यक्ति?
निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीका हरेक कर्तुत् प्रमाण मेटाउने को हुन् ती पोख्त व्यक्ति?
admin September 15, 2018 समाज	0
काठमाडौं । कञ्चनपुर घटना अथवा निर्मला हत्या प्रकरण । प्रहरी प्रशासन, सरकार र शासकबाट ढाकछोप र रक्षात्मक व्यवहार प्रदर्शन । अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ । छानविन समिति, समय कटाउँदै । प्रहरीबाटै प्रमाण नष्ट । स्थानीयलाई अनावश्यक यातना । शंकास्पदहरुलाई सुरक्षा । यस्ता मिलेमतोमा बुनिएका कयौँ विवरण एक पछि अर्को गरी खुल्दै छन् । जसले प्रहरीको छवि धुलोमै मिल्न आँटिसक्यो ।
घटना घटेको ५२ दिन वितिसक्यो । अनुसन्धानको नतिजा शून्यप्रायः छ । संविधानको धारा २१ अथवा मौलिक हक अन्तर्गत अपराध पीडितको हक राखिएको छ । उपधारा (१) मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ । अहिलेसम्म अनुसन्धानको नतिजा शून्य भनिँदै छ । अनुसन्धानमा प्रगति नहुनु र पीडितलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीको जानकारी नदिनु संविधानको मौलिक हक विरीत छ ।
उपधारा (२) मा अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ । घटना भएको ५२ दिनसम्म अनुसन्धान वा कारबाहीको कुनै जानकारी पीडितलाई नदिएकामा अब सम्बन्धित निकायले क्षतिपूर्ति कति दिने हो ? यो वापतको न्याय पाउने कहिले ? प्रश्नमाथि प्रश्न, अन्यायमाथि अन्याय थपिँदै गएका छन् ।
प्रहरी अधिकारीहरु आफै भन्दछन् –अपराधीले घटनास्थलमा केही न केही प्रमाण छोडेर जान्छ । निर्मला पन्तको हत्यामा पनि हत्याराले प्रमाण नष्ट गर्न अनेक प्रयत्न गरेपनि केही प्रमाण छोडेर गयो । तर, त्यो प्रमाण प्रहरीले संकल गरेन कि उल्टै नष्ट गर्न उद्दत रहयो । उल्टो अनुसन्धान : जसले प्रहरीमाथि शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्त उब्जायो । यतिसम्म कि अपराध अनुसन्धानमा पोख्त व्यक्तिले नै हत्या गरेको पो हो की ? सम्मको शंका । हत्याराले घटनास्थलमा छाडेका सबै प्रमाण अपराध अनुसन्धानबारे जानकार प्रहरीले नै सुझबुझ ढंगले नष्ट गर्न खोजेको ठहर्छ ।
घुँडासम्म पानी जमेको उखुबारीमा घोप्टो परेको अवस्थामा निर्मलाको शव भेटिएको थियो । जानी बुझी, निकै होसियारपूर्वक । हत्याराले बालात्कारपछि निर्मलाको गुप्तांगबाट विर्य, रगत पखालियोस् भनेरै पानी जमेको उखुबारीमा घोप्टो पारेर शव फालेको हुनसक्ने प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
पानी भएको ठाउँमा खुट्टाको छाप देखिँदैन भन्ने जानेरै पानी भएकै ठाउँमा शव फालेको ठहरिन्छ । संयोगले त्यही दिन मुसलधारे पानि परिदियो । मानौँ कि त्यो दिन मौसम पनि बेइमान भयो । हत्यारालाई सघायो । निर्मलाको विभत्स शव भिजायो, पखाल्यो, डुबायो ।
शव घोप्टो पारेर पानीमा डुबाइएकाले शरीरका अन्य भाग र लुगामा पाइन सक्ने रगत, राैँ, विर्यलगायत प्रमाण नष्ट हुन पुगे । पानीले पखालेपछि फिंगर प्रिन्ट पाउने सम्भावना न्यून भयो, शवबाट । तर, शव भेटिएको उखुबारीमा पुग्न भने खोला तर्नु पर्छ । अनुसन्धानमा किन कुकुर प्रयोग गरिएन भन्ने प्रश्न समेत उठ्यो ? तर, कुकुर खोला तर्न डराउँछ । अर्कोतिर अपराधीले खोला तरेपछि उसले पहिल्याएको बाटो टुट्छ । कुकुरले बाटो पछुयाउन कठिन हुन्छ । अपराधीले यति धेरै सुझबुझ गरेको छ कि कुकुर प्रयोग गरिहाले पनि बाटो पत्ता नलागोस् । अपराध गर्ने अथवा अपराधीलाई सघाउने व्यक्ति अनुसन्धानबारे जानकार हुनुपर्छ भन्ने शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ ।
निर्मलाको शव पानीमा फालिएकाले मृत शरीरमा फिंगर प्रिन्ट भेट्न कठिनाई हुनु स्वभाविक हो । तर, निर्मलाको साइकल खोलामा फालिएको थियो । साइकल पानीमा डुबेकाले फिंगर प्रिन्ट मेटिने नै भयो । अपराध गर्ने व्यक्ति कति चलाख ? तर, केही न केही प्रमाण छोड्छ भने झँ कापीकिताब भने खोलामा फाल्न भूल्यो । अथवा यहाँ नेर एउटा शंका गर्ने ठाउँछ । किताब पानी पर्न रोकिएपछि अरु कसैले लगेर फालेको हो कि ? खान तलासी गर्दा किताब कापी भेटियो भने फसिन्छ भन्ने डरले त्यो घटनाबारे थाहा पाउने अरु कसैले फालेको हो कि ? शंका गर्ने ठाउँ छ । किन भने, रातभर पानी पर्दा पनि कापी किताब भिजेका छैनन् । स्थानीयका अनुसार त्यो रात मुसलधारे पानी परेको थियो ।
तर, प्रहरीले नभिजेका ती कापी किताबबाट पनि फिंगर प्रिन्ट लिएन । यो कुरा कञ्चनपुर प्रहरी कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण ओझाले नै स्वीकारे । उनका अनुसार पहिलो अनुसन्धान टोलीले कापीकिताबबाट फिंगर प्रिन्ट संकलन गरेन । कञ्चनपुरबाट ५५ किलोमिटर दूरी पर्ने धनगढीमै तालिम प्राप्त कुकुर छन् । अनुसन्धान गर्ने टोलीले त्यो सम्झिएन । कापीकिताबाट फिंगर प्रिन्ट पनि लिइएन । यसले अपराध गर्नेले यो घटनामा धेरैलाई संलग्न गराएको शंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ ।
खुट्टाको छापको पनि नमूना लिइएन
अपराधीले आफ्ना पैतालाको छाप नदेखियोस् भनेर शव पानीपानी भएको उखुबारीमा लगेर फालेको देखिन्छ । तर, स्थानीयका अनुसार खोलाबाट उखुबारीमा उक्लिने ठाउँमा तीन फरक–फरक पैतालाका छाप थियो । प्रहरीले ती तीन वटा छापको नमूना पनि संकलन गरेन । उखुबारी उक्लिने डिलमा रहेका ती छाप संकलन गर्न आग्रह गर्दा अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले स्थानीयलाई उल्टै धम्काए । हातपात गरौँला झैँ गरे ।
शव भेट्नासाथ गरेका गल्ती
तर, दुई–दुई जना प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा खटिएका प्रहरीले हातले समातेर शव उत्तानो पारे । एक खुट्टामा लत्रिएको सुरुवाल पनि महिला प्रहरीले निकालिन् अनि पानीमा धोइन् । सुरुवाल धोएको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो । शवको गोप्य अंग ढाक्न खुट्टासम्म लत्रिएको सुरुवाल पखालेर प्रयोग गरियो । यो कस्नो अनुसन्धान पद्दती हो ? जहाँ अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीको अपरिपक्वता वा नियत प्रष्ट देखिन्छ छ ।
प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरीको त्यही कर्मले पनि ठूलो काम गरिदियो । यतिसम्म कि उखुवारीबाट शव उठाउनेदेखि निर्मलाको अन्तिम संस्कार गर्दासम्म धेरै प्रमाणहरु मेटाउने र अपराधी लुकाउने कार्यमा प्रहरीको ठूलो हात रहयो । त्यसैले पूर्व एआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले प्रहरी चुकेको र गम्भीर त्रुटि गरेको भनिरहेका छन् ।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण आरोपी बबिता बमले खोलिन् यस्तो खुलाशा! एक्सक्लुसिभ यो भिडियो अवस्य हेर्नुहोस
नारायणी काण्ड: घरवेटी आईन मिडियामा, बुढाबुढीको मेरै अगाडी झगडा भयो/उनी नारायणी तिर गईन्् (भिडियो सहित)